တူမလေးများနဲ့ တလတာ.. | မိုးချိုသင်း မှတ်တမ်း
အမရေးတာ မဖတ်ရတာ တော်တော်ကြာနေပြီနော်... :P
Hannah Montana သီချင်းတွေ ယူကျုမှာရှာပေးရတယ်..။
ဂျစ်စတင်းဘီဘာရဲ့ ဘေးဘီကိုလဲ မရိုးနိုင်အောင်နားထောင်ရတယ်..။
ခခက ကျနော့်ကို အလျှော့ပေးရတာများပါတယ်.။
Thanks for sharing your blissful time with your beloved ones.
မမရေ.. ကူးတော့အသက်ငယ်တဲ့သူတွေနဲ့ မပေါင်းတတ်သေးဘူး။ အကြီးဆုံးတူလေးက ၄ နှစ် သူအိမ်လာရင် ကူးအိမ်ထဲဝင်ပုန်းနေတာဘဲ..
တူမတွေနဲ့ ခရီးသွားရတာ ပျော်စရာကြီးပေါ့လေ။
ဒါနဲ့ အစ်မချို ရဲ့ နှုတ်ဆက်နည်းလေး မှတ်ထားပါတယ်။
ဟိဟိ ..မဖတ်ရတာကြလို့ ဖတ်ကောင်းထှာ
ဖတ်ရတာတောင် ဒီလောက် ပျော်စရာကောင်းနေတော့ ချိုသင်း ဘယ်လောက်ပျော်ခဲ့မယ်ဆိုတာ မှန်းလို့ရနေတယ်...
အမ ကျွန်တော်တို့ဖက် ဆိုင်လာဖွင့်... အကုန်မြင်ရမယ်။ ဒါပေမယ့်လဲ မထူးပါဘူး အမရာ မြင်ရလဲ ရုပ်ရှင် ကြည့်နေကျ မဟုတ်လို့ ဘယ်သူတွေမှန်း မသိပါဘူး။ နှစ်ဆန်းပိုင်းက ဂျက်ကီချန်း ဆိုင်ထဲ ဝင်နေတာကို ဘယ်သူမှန်းမသိ :P
မအေး အကြောင်း ပြောပြတာ မိုက်တယ်... တော်တော် ရီရတယ်။
မမ....မရေးတာအတော်ကြာနေပေမယ့် ပြန်ရေးပြန်တော့လည်း ထုံးစံအတိုင်းဖတ်လို့ကောင်းနေတာပါပဲ။ တပြုံးပြုံးနဲ့ဖတ်သွားတယ်။ ကြည်နူးမှုတွေပါ ကူးစက်သွားတယ်။ တူမလေးတွေရဲ့ ပုံလေးတွေကိုကြည့်ရတာလည်းပျော်စရာကြီး။း)
အညိုရောင် ဂျာကင်ဝတ်ထားတဲ့ တူမလေးက ချိုသင်းနဲ့ တူသလိုပဲ
အစ်မ ပိုစ့် လေးတွေကို မျှော်နေတာ။
ဖတ်ရတာ ကြည်နူး ပျော်စရာကောင်းတယ်။ အစ်မ ရဲ့ အစ်မ နှုတ်ဆက်တာကိုလဲ မြင်ယောင် ကြားယောင်ပြီး ရီနေရတယ်။း)
ဆက်ရေးပါဦး။ နောက်တခါ ကလေးတွေက ဟောလီးဝုဒ်မှာ ဘယ်မင်းသား တွေ့ဖူးသလဲမေးရင်ayew i n တွေ့ဖူးတယ်ပြော။ သမီးတို့ အဖိုး g yan နဲ့ လည်း ခင်တယ်ပြော။
မချိုသင်း.. အမျိုးတွေနဲ့ တွေရတာ ပျော်စရာကောင်းလိုက်တာ။ ကလေးတွေကိုနှုတ်ဆက်ပေးပါနော်။
ဟေးးးးးး ချိုသင်းရေးးးးးး နေကောင်းရဲ့လားးးး အကျယ်ကြီး အော်လိုက်တယ်နော်.... တော်တော်ပျော်ခဲ့မှာပဲ ဆိုတာ သိပါ့တော်....
ဗီဒီယိုဖိုင်လေးများ တင်ပေးဖို့ မရှိဘူးလားဟင်၊ ကလေးတွေနဲ့အတူ အဒေါ်ပါ ခုန်ပေါက်နေတာကို ကြည့်ချင်လို့....:)
Yi Yi said...
ဘာအကြောင်းပဲ ရေးရေး ဖတ်လို့ ကောင်းပါတယ် …
Justin Bieber ရဲ့ ဘေးဘီ ဘေးဘီ ကတော့ ကျွန်မရဲ့ သမီး ၄ နှစ်၃လ နဲ့သား ၁ နှစ် ၅ လ တို့ လဲ အလွန်ကြိုက်ပဲ … သားဆိုရင်ထမင်းစားချိန်တိုင်းဖွင့်ပေးရတယ်…
မမ စာပြန်ရေးတာ အရမ်းဝမ်းသာတာပဲ။ ပျော်လိုက်တာ တကယ်။ ရယ်လိုက်ရတာ :D
ချိုသင်းပျောက်နေတာ အလုပ်များနေတယ် မှတ်နေတာ။ ခုတော့ အလုပ်များတာလည်း တပိုင်း၊ အပျော်ကြီး ပျော်နေတာလည်း တပိုင်းဖြစ်နေတာကိုး။
သမီးတကောင် သားတကောင်ဆိုတော့ ခုခေတ်ပေါ် အဆိုတော်တွေကို ချိုသင်းထက်တော့ ပိုသိတာ အမှန်ပဲ။
သားတော်မောင်ဆို လူကသာ လက်တောက်လောက် I'm not afraid ဆိုတာက ပါးစပ်က မချဘူး။ ဆိုရင်းနဲ့ စာသားမသိတော့ရင် သူသိတာကို သံစဉ်ပြောင်းပြီး ဆိုတော့တာပဲ။
I'm not afraid :P
အကိုတော့ တူမတွေအကြောင်းကို ၃ခေါက်တောင် ပြုံးပြုံးကြီး ဖတ်လိုက်တာ..ငါ့နှမရော ကျမ်းမာရေး ဂရုစိုက်နော်.. ကလေးတွေ viedo ကို face book မှာဖြစ်ဖြစ် တင်ထားပါဦး
ပျော်စရာကြီးးးး အိမ်တောင်ပြန်ပြေးချင်လာတယ် .. ..
ဒိန် !!! အကျယ်ကြီး နှုတ်ဆက်လိုက်တယ်း)))
အမ တူမလေးတွေနဲ့ တော်တော်
စာတွေမရေးတာကြာလို့ နေများမကောင်းလို့ လားးးး
ဆိုင်မှာဘဲ အလုပ်တွေရှုပ်နေလို့ လား..
ဘာများဖြစ်နေလို့ လဲ..နဲ့ 
သူက ကလေးတွေနဲ့ ဟော့ရှော့လုပ်နေတာကိုးးးးးး။
ကိုယ်က ဒါလေးတွေနဲ့ အပေါင်းအသင်းလုပ်မယ်ဆိုလဲ..
မအေးကလဲ တော်ပါသေးရဲ့ ..
ဟိုက ဒတ်ခ်ျ အမျိုးသမီးဆိုတော့...
ဒတ်ခ်ျလို ဟိန်...ပြောပြီးနုတ်ဆက်တာကို..ဒိန် လို့ ပြော
လို့ ..ဂျပန်လိုများ “ဟိုင်း” ဆိုရင်တော့
မအေးကလဲ “ ဒိုင်း” ကနဲဘဲ..။
တော်ကြာနုတ်ဆက်တဲ့ သူလဲ ၈ျပန်သတင်းထောက်လို
ကင်မရာလေးကိုင်ပြီး စန့် နေမှာ..။း)
မအေးနဲ့ တွေ့ ၇င် သတိထားနုတ်ဆက်လေမှ..။
Htet Khaing said...
ကြည်နူဖွယ်ရာ စာလေးတွေ ဖတ်ရတာကျေးဇူးတင်ပါတယ် အမရာ
ခုတလော Blog တွေဖတ်ရတာ သိုင်းဝတ္ထုတွေလို ခုတ်တာထစ်တာတွေပဲ ဖတ်နေရလို့။
အမက ခရီးရှည်ကြီးထွက်နေတာကိုး။ အလွန်ပျော်ခဲ့တယ်ဆိုလို့ အပျော်တွေ ကူးစက်သွားပါတယ်။ ဆက်လက်ပြီးလဲ ပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေ။
ပိုစ့်အသစ်ကို မျှော်နေတာကြာပြီ အမမိုးချိုရေ...ဒိန် အကြောင်းဖတ်ပြီး အီးမေးလ်လိပ်စာတောင်းတာ ပတ်စ်ဝါ့ဒ်ပါ အတင်းပေးတဲ့ ကိစ္စသွားသတိယပြီး ပြုံးမိသွားတယ်။
Pan Nu said...
မယွန်းဆီမှာပေးခဲ့တဲ့မှတ်ချက်ပါ။ မချိုသင်းရဲ့ တူမလေးတွေ အကြောင်းပြောမိလို့ ကော်ပီလာပေးတာပါ။
ပြင်ပရောက်နေတဲ့ လူတွေက ကိုယ့်ကလေးကိုယ် ဗမာစကားတတ်စေချင်တယ်။ သင်ပေးဖို့ကြိုးစားတယ်ဆိုတာ တကယ်အမြော်အမြင်ရှိတဲ့ လူတွေပါ၊ ကိုယ့်ကလေးကိုယ် ဘိုလိုပြောတာ ကျေနပ်နေကြတဲ့ သူတွေကတော့ မပြည့်တဲ့အိုးတွေလို ခံယူထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပြည်တွင်းကလူတွေ ဗမာလိုမပြောတတ်ပါဘူး ဆိုတာမျိုးကတော့ ဘယ်လိုလူစားမျိုးလို့တောင်ှမပြောတတ်တော့ဘူး။ တလောက လျှပ်တပြက်ဂျာနယ်မှာ မေသန်းနုသား မင်းသန့်မောင်မောင်ဖြေထားတာမျိုးပေါ့။ သားက ကျောင်းမှာလဲ ဘိုလိုပဲပြောတော့ ဘိုလိုပဲအားသန်တယ်။ ဗမာလိုဆို သိပ်တောင်မပြောတတ်၊ နားမလည်တော့ဘူးတဲ့။ အဲဒီ အင်တာဗျူးကိုပြန်ဖြေတာကျတော့ ဗမာလိုကြီး။ သူ့အမေနဲ့လဲ အိမ်မှာ အင်္ဂလိပ်လိုပဲပြောနေကြလားတော့မသိဘူး။ ဖတ်ရင်းနဲ့တောင် စိတ်မကောင်းဘူး။ ဗမာပြည်တွင်းမှာ ပိုက်ဆံလေးနည်းနည်းတတ်နိုင်တာနဲ့ အပြင်ကျောင်းထားကြ ဗမာလိုမပြောနိုင်တော့ဘူးလို့ ပြောကြနဲ့။ ကျွန်မကတော့ ကလေးတွေရရင် မချိုသင်း တူမလေးတွေလို ပြောတတ်ရုံတင်မဟုတ် စာပါဖတ်နိုင်အောင် ကြိုးစားသင်ပေးချင်ပါတယ်။
သူတို့ နဲ့ နေရတာ ပျော်စရာကြီးနေမှာ ..
(မမရေ ..လာလည်တဲ့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်)
ကျော်ဟိန်းကြီးနဲ့ ခင်မှာပေါ့ ဟီးဟီး. တို့ကို မိတ်ဆက်ပေး
ဟားဟား မိုးချိုသင်း ရေ
ပျော်စရာကြီး ပျော်စရာကောင်းအောင် ရေးတတ်တယ်
မမ တူမလေးတွေက အားလုံးချစ်စရာလေးတွေနော်.. အရွယ်လေးတွေကလည်း သိပ်မကွာတော့ ပျော်စရာကြီးပဲ.. အမစာဖတ်ပြီး ကျနော်တို့တောင် ပျော်တယ်..:))
" ဟိန် " ကတည်းက ဒီက ရယ်ချင်နေပြီ။ " ဒိန် " ဆိုတော့ ပြီးရော ... ပတ်တုတ်မရတော့ဘူး။ ရယ်လိုက်ရတာ ...
တို့လဲ အညိုလေးကို မချိုသင်း ထင်နေတာ ... တူမလေးတွေက ချစ်စရာ ...
အလုပ်တွေများနေလို့ ခုမှရောက်ဖြစ်တယ် အစ်မ။
အစ်မရေးထားတာဖတ်ပြီး ကြည်နူးမှုတွေပါ ကူးစက်သွားတယ်။
ဥရောပအတွေ့အကြုံနဲ့ ဓလေ့တွေကို မျှဝေပေးပါဦးနော်။
မမချိုရော မမအေးလို ဘာတွေလွဲခဲ့သေးသလဲလို့ တွေးလိုက်သေးတယ်။ :P
ဟိုရောက်ရင် " ဒိန် " ကို မှတ်ထားပြီး ပြောပစ်မှာ ...
စာဖတ်ရတာ ပျော်စရာ ..
ကျေးဇူး အများကြီးတင်ပါတယ် ..
နောက်လည်း အများကြီး ရေးနိုင်ပါစေ ..
မချိုသင်းပို့်စ်နောက်ဆုံးနားကို သမီးကို ဖတ်ပြတာ ရယ်လိုက်တာ။
ခုအိမ်မှာ ကစားစရာ အသစ်တိုးတယ်။ အစ်မက" ဒါ့ " လို့ နှုတ်ဆက်ရင် ... သူက " ဟိန် " လို့ ပြန် နှူတ်ဆက်ရတယ်။ အစ်မက " ဟိန်" ဆိုရင်တော့ မချိူသင်းအစ်မလို သူက " ဒိန် " ဆို အော်ရတာ။ အစ်မက နောက်ပြီး "ဂိန် " ဆိုပြီး ပြန်အော်တော့ အရမ်း ရယ်နေကြတာ။ ကစားနည်းက ဒတ်ခ်ျလို နှုတ်ဆက်နည်း။ အိမ်မှာတော့ ဂျူဂျူတို့ အဲလိုကစားရင်းနဲ့ စာကြည့်ရင်း ရယ်နေရတော့ အရင်ကလို မျက်နှာကြီးသိပ်စူပုတ်မနေတော့ဘူး။ မချိုသင်းကို ကျေးဇူးတင်ရမယ်။
စိတ်ချမ်းသာလိုက်တာ ပျော်စရာကြီး မမမိုးချို အလွမ်းပြေသွားပြီ :)
ချစ်တဲ့ အစ်မရေ message ရရချင်း ၀င်ဖတ်ပြီးသွားပြီ … အဲနေ့က ကွန်မန့်မရလို့ ဒီနေ့မှပြန်လာရေးတာ… မမအေးက အရမ်းကိုရီရတာပဲ.. အဲလိုပဲ သတိထားရင်ဖြစ်တတ်တယ် တခါတုန်းက ရုံးရဲ့ ကုန်စည်ပြပွဲမှာလေ ဘုန်းဘုန်းတပါးကို ပစည်းအကြောင်းရှင်းပြနေတာပြီးပြီးချင်းပဲ ရုံးချုပ်က CEO လာတယ်ပေါ့ သတိအနေအထားနဲ့ တက်ကြွနေတာ သူကဘာမေးရင် ငါက ဘယ်လိုဖြေမယ်ပေါ့ အဲလိုတွေးနေတုန်း CEO က သမီးက ရန်ကုန် branch ကလားတဲ့ လှမ်းမေးတာ နဂိုထဲကသတိထားနေတာဆိုတော့ သွက်သွက်လက်လက်နဲ့ ပြုံးပြီးဖြေလိုက်မိတယ် တင်ပါ့ဘုရား လို့ အဲဒီထဲ က အဖိုးကြီးလဲ ဘာမှဆက်မမေးတော့ဘူး ညီမလဲ ရုံးမှာနံမည်ကြီးသွားတာပေါ့ အစ်မရယ် .. ချစ်တဲ့ နေကြည်
" ဒိန် " ဆိုလို. ရယ်လိုက်ရတာအမရယ်...
အမစာတွေဖတ်ရတာ ပျော်စရာကောင်းလို. ....
Kyaw Kyaw Zin said...
အစ်မစာလေးတွေ ဖတ်ရရင် အမြဲ စိတ်ချမ်းသာတယ်.. ပြုံးပျော်သွက်လက်နေသလိုပဲ..
အင်း။ ကျွန်တော်လည်း အရင်က ဂွတ်ဒမော်ဂန် ခဏခဏ လုပ်ဖူးတယ်။ :P
မမိုးချိုသင်းရေ အိမ်က ၂ နှစ် ၅ လ သမီးလေးက သူသိတဲ့ PBS 39 က သီချင်းတွေဆိုရင် အမက လိုက်ဝါးပေးနေရတယ် သီချင်းကိုမရလို့လေ။ ချိုသင်းကို ကိုယ်ချင်းစာမိတယ်၊ ဒါပေမဲ့ တစ်ခါတစ်ခါတော့လည်း သူခိုးမိသွားတာတွေရှိတယ်နော်၊
FB မှာ ကျနော့ ညီမ မချိုသင်းတူမ ၂ယောက် နဲ့ တွဲ ရိုတ်ထားတဲ့ ပုံ တွေ့လိုက်တယ်။ အချိန် သိပ်မကွာဘူး။ ဒိန်
တူမလေးတွေနဲ့တွေ့ပြီး ပျောက်နေလို့ တံခါးလာခေါက်ပါတယ်။
မမိုးချို ရဲ. ဒိန် ကို နေကြည် ရဲ. တင်ပါ.ဘုရား က ပိုပြီး အရှိန်တက်စေတယ်။
"ဒါ့!!!" "ဟိန်!!!" "ဒိန်!!!" ပေါ့နော်။း)
လာလည်သွားတယ်မမရေ။ လင့်ခ်လေး ယူသွားမယ်နော်။
အမရေ လွမ်းလိုက်တာ... facebook မှာ မတန်ခူးရေးတာ တခု တွေ့လို့ အမဆီလည်း ရောက်လာတာ...
အမရေ လွမ်းလိုက်တာ... မရောက်တာ ကြာလှမို့ ခွင့်လွှတ်ပါ
"၀မ်းနည်းတာကတော့ သူတို့တွေရဲ့ အခုလို ချစ်စရာအကောင်းဆုံး အရွယ်လေးတွေမှာ အနားမှာနေပြီး သူတို့ တိုးတက်လာတာလေးတွေ၊ အလေ့အကျင့်လေးတွေ စောင့်ကြည့် အကဲခတ်ခွင့် မရတာကိုပါ။ "...
...ဆိုတဲ့ ဆရာမရဲ့ သဘောထားကို
ရေကြည်မြက်နု ရာတွေ ရွေ့လျားနေကြရတဲ့ မိသးစုတွေရဲ့ ဘ၀ပုံရိပ် တွေထဲက ပေးဆပ်လိုက်ရတာ တစ်မျိုးကို ဆွဲထုတ်ပြလိုက်တာပါပဲ ... ချမ်းမြေ့ပါစေ ...
Just come to check whether you are back to your blog. Best Wishes.
ဒိန်...လို့ နှုတ်ဆက်မိတာလေးက ချစ်စရာ...
ဖတ်ရင်း ကျေကျေနပ်နပ်ကြီး ရယ်သွားပါတယ်ရှင်...
Григорий Кубатьян said...
I am looking for Myanmar bloggers to makeareportage about them for Russian press.
Could you recommend me the most interesting and popular bloggers? Or may be you will agree to give an interview about your experience?
My address is sejaha@yandex.ru
ဖတ်ရတာ အရမ်းသဘောကျတာပဲ အမချိုသင်းရေ
ခုမှလာလည်ဖြစ်ပေမယ့် စာလေးတွေ နောက်ထပ်လည်း လာဖတ်မယ်နော်.. :)
ချိုသင်းရေ. ဒီနေ့ ပိုလွမ်းလို့ လာလည်ပါတယ်. ချိုသင်းချစ်ခင်ပွန်းအတွက်ကောင်းသောမွေးနေ့ ဖြစ်ပါစေလို့ 
Happy New Year to Ma Moe Cho Thin!
Hello,Wondered if you know the Lord Jesus as your personal Saviour and Lord God. He came to die for sinners on the cross, to be buried, and to rise from the dead the third day,was seen of men, and went back up to heaven.And will save all sinners who will repent and believe the gospel in their hearts.This is found in the word of God, the Holy Bible in John and Romans. And find church that believes it and listen in to FBNRadio.com also for good Christian music and preaching and teaching. God bless you as you do.